२o७५ कार्तिक ५ सोमबार| प्रकाशित १५:o६:४१
काठमाडौं– दसैंको टिकाको भोलिपल्ट, शनिबार दिउँसो साढे १ बजे। स्थान–सुनसरीको भान्टाबारी। भान्टाबारी प्रहरी चौकीका प्रमुख सई अवधलाल साहले सप्तरीबाट सुनसरी आउँदै गरेको रक्सीले लठ्ठिएको एक युवकलाई चेकजाँच गर्दा ३ वटा भारतीय सीमकार्ड फेला पार्छन्।
तीन/तीन वटा भारतीय सीमकार्ड फेला पारेपछि शंकालु हुँदै सई साहले सोध्छन् – ‘घर कहाँ हो?’
रातो सर्ट, हरियो, कालो र सेतो रंग मिसिएको भेस्ट लगाएका, दाहिने हातको नाडीमा रंगीचंगी डोरा बाँधेका, पैदल हिँडिरहेका कालो वर्णका युवकले जवाफ फर्काउँछन् – ‘धनुषा’।
सई साहले लगत्तै अर्को प्रश्न तेर्स्याउँछन् – ‘धनुषा कुन ठाउँ?’।
युकले जवाफ फर्काउँछन् – ‘सितापुर।’
धुनषामा सितापुर छैन। सितापुर त महोत्तरीमा छ। सई साह महोत्तरीकै सितापुर प्रहरी चौकीको इन्चार्ज भएर भान्टाबारी सरुवा भएको दुई महिना मात्रै भएको थियो। ठाउँको बारेमा समेत जानकार सई साहलाई ती युवकले ढाट्न खोजेको भेउ पाइसकेका थिए। त्यसपछिको युवकको हाउभाउ सई साहलाई झनै शंकास्पद लाग्छ र थप प्रश्न गर्न थाल्छन्।
रक्सीले मातेका युवकलाई अर्को यक्ष प्रश्न गरिन्छ – ‘सितापुर कुन ठाउँ हो घर?’
‘स्कुल पछाडि’, काँपेको स्वरमा ती युवकले जवाफ फर्काए।
‘बुवाको नाम के हो?
महोत्तरीमै साढे ९ महिना काम गरेका सई साह ८ महिने बालिका बलात्कार हत्याको बारेमा जानकार थिए। उनी सनुसरी सरुवा भएको एक सातापछि मात्रै बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। ‘एकपछि अर्को कुरा ढाँट्न थालेपछि मलाई झनै शंका लाग्यो’, सई साहले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै भने, ‘बालिका चोरी गरी हत्या गर्नेको सिसिटिभीमा देखिएको हुलिया पनि केही मिलेजस्तो लाग्यो। झन् प्रश्न गर्न थालेँ।’
बालिका चोरी गरेर लैजाँदै गर्दा सिसिटिभीमा देखिएको दृश्य
‘तेरो वडाको मुखिया (वडाध्यक्ष)को नाम के हो?’
चौठी महतो भंगवा गाउँपालिका–६ हात्तिसर्वाको भन्नेसमेत जानकारी भएका सईलाई ती युवकले झनै ढाट्न खोजे। चौठी महतो भंगवा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष हुन्।
महोत्तरी बस्दा नै राम्रो सम्बन्ध बनाएका चौठीलाई सई साहले ती युवकको फोटो खिचिरे ‘म्यासेन्जर’मा पठाउँदै लेखे, ‘मुखियाजी हेर्नुस् त, महोत्तरीकी ८ महिने बालिका चोरी गरेर हत्या गर्ने मान्छे यो हो कि होइन?’
केहीबेरमै जवाफ आउँछ– ‘हो, यही मान्छे हो।’
मुखियाको कुराले मात्रै उनी पूर्ण विश्वस्त हुन सक्दैनन्। त्यसपछि उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको मुद्दा शाखामा पनि फोटो पठाउँछन्। मुद्दा शाखाले पनि फोटो ‘भेरिफाइ’ गर्छ। अन्ततः पुष्टि हुन्छ कि रक्सीले मातेर लट्ठ भएका व्यक्ति अरु कोही नभई महोत्तरीमा ८ महिने बालिका चोरी गरी हत्या गर्ने महोत्तरीकै हात्तिसर्वा गाविसका २५ वर्षीय भरत साह हुन्।
उनले महोत्तरीको औरही नगरपालिका–१ का सन्तोष चौधरीकी ८ महिने छोरी सोनालीको भदौ ११ गते जनै पूर्णिमा दिन चोरी गरी बलात्कार गरेर हत्या गरेका थिए।
कसरी भएको थियो हत्या?
सितापुर पसलबाट बच्चा चोरेर भरत सुरुमा घर लान खाजेको तर पछि घर नलगी बलात्कार गरेर हत्या गरेको प्रहरी समक्ष बयान दिएको महोत्तरी एसपी यश्वर कार्कीले जानकारी दिए। बच्चालाई जंगलतिर लगेर बिस्कुट खान दिएको तर बच्चाले बिस्कुट नखाएपछि आफैंले खाएर बलात्कार गरी हत्या गरेको साहले बताएका छन्।
बच्चा हराएको थाहा पाएपछि प्रहरी र स्थानीयबासीले आफ्नो खोजी गरेपछि आफू धानबारी नै धानबारी भागेर भारतको सितामणी पुगेको उनले बताएका छन्।
‘प्रहरीको मोटररसाइकलको आवाज आयो। गाउँले पनि कराउन थाले। त्यसपछि डर लागेर सकडमा नकिस्की धानबारीबाटै सलार्ही हुँदै भारत पसें’, आरोपित साहलाई उद्दृद गर्दै एसपी कार्कीले भने।
भारतमा कवाडी र ज्यामीको काम, प्रतिक्षालयको सुताइ
बयानका क्रममा सितामणीमा साहले २० दिन बिताएको बताएका छन्। त्यहाँ उनले ज्यामी काम गर्ने गर्थे। कहीलेकाहीं सिसी बोतल जम्मा पारेर बेच्ने कवाडीको कामसमेत गरेको बताएका छन्। त्यही दिनभरको कमाइले उनी होटलमा खाना खान्थे भने रातको सुताइ भने रेल्वे स्टेसनको प्रतिक्षालयमा हुन्थ्यो।
सितामणीमा पनि प्रहरी परिचालन गरेर व्यापक खोजी हुन थालेपछि त्यसपछि साहले आफू त्यहाँबाट गाडी चेढेर दरभंगा गएको बताएका छन्। दरभंगामा पनि उनको दैनिकी उस्तैगरी बित्ने गरेको बयान दिएका छन्। ‘दिनभर ज्यामी वा कवाडी बटुल्ने अनि रातको बास प्रतिक्षालयमै हुन्थ्यो।’, आरोपित साहको बयानलाई उद्दृद गर्दै एसपी कार्कीले भने।
झन्डै दुई महिनासम्म भारतमा लुकिछिपी बसेको भरतलाई नेपालीहरुको महान चाड दसैंको ज्यादै न्यास्रो लाग्छ। नेपाल हुँदा रमाइलो गरिएको दुर्गा पूजाको झझल्कोले उनलाई सताउँछ र शाह घर फर्किन्छन्। ‘दुर्गा पूजा जाउँ–जाउँ लाग्यो। मन नै नमानेपछि दुर्गा पूजा हेर्नकै लागि नेपाल आएको थिएँ’, साहले बयानमा बताएको कुरा सुनाए सई अवधलालले।
दुर्गा पूजा हेर्न नेपाल आएका उनी अन्ततः पक्राउ पर्छन्। उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा बुझाएको छ। उनीमाथि कर्तव्य ज्यान तथा जबरजस्ती करणी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको महोत्तरीका एसपी कार्कीले जनाएका छन्।
साँझ करिब साढे ६ बजे आफ्नै पसलबाट हराएकी छाेरी नभेट्टिएपछि चाैधरी परिवारले राति ९ बजे बच्चा हराएको प्रहरीलाई जानकारी गराइएको थियो।
भोलिपल्ट मृत अवस्थामा सोनाली औरही–८ स्थित जंगलमा भेटिएकी थिएन्। पसलबाट १ किलोमिटर पूर्वमा आँप बगैंचामा उनको शव भेटिएको थियो।
बालिकाको शरीरमा चोटपटक देखिएकाले थप आशंका उब्जिएको भन्दै बालिककाको शव पोष्टमार्टम गरिएको थियो। बालिकाको यौनांग र मलद्वारमा गहिरो चोट रहेको पाइएकाले बालिकाको शव पोष्टमार्टम गर्दा बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएको थियो।
आठ महिने बालिकाको चोरी गरेर हत्या हुनु गम्भीर भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
प्रहरीले सिसिटिभी फुटेजमा बच्चा बोकेर हिँडेको दृश्यसमेत फेला पारको थियो। सिसिटिभी फुटेजमा महोत्तरीकै तत्कालीन हात्तिसर्वा गाविसका २५ वर्षीय भरत साहलाई पसल अगाडिबाट बच्चा बोकेर हिँडेको देखिएको पत्ता लागेको थियो।
साह केही समयअघि मात्रै सिरहा कारागारबाट छुटेका कैदी हुन्। कारागारबाट छुटे पनि उनको बानी भने सुध्रिएको थिएन। उनी घरकै सामान तथा पैसासमेत चाेरी गर्न बाँकी राख्दैनथे।
अाराेपित साहकाे नागरिकताकाे प्रमाणपत्र
चोरेर हैरान पारेका कारण उनका परिवारका सदस्यहरु पनि उनीबाट आजित थिए। बन्द घर तथा मान्छे नभएको मौका पारेर चोरी गर्नु उनको बानी थियो। भरतलाई चिन्नेहरु उनलाई देख्नासाथ सतर्क हुन्थे।